Ireto ny toro-hevitra amin'ny mailakao momba ny vanim-potoana fialantsasatra 2014. Martech Zone
Ireto ny toro-hevitra amin'ny mailakao momba ny vanim-potoana fialantsasatra 2014
Alarobia, Oktobra 29, 2014 Alarobia, Oktobra 29, 2014 Douglas Karr
Ny mailaka dia faharoa ihany raha hikaroka ny manjaka amin'ny varotra mandritra ny fialantsasatra. Ny mpivarotra dia misambotra, mampitombo ny fandefasana mailaka amin'ny alàlan'ny 13 isan-jato isan-taona mandavantaona eo anelanelan'ny 2012 sy 2013. Tsy isalasalana fa ho hitantsika miakatra indray ireo isa amin'ity taona ity ka mila miomana ianao. izany infographic avy amin'ny Email Monks manome toro-hevitra marim-pototra ary angona angon-drakitra manampy anao hanombohana dieny izao.
Maneno ny lakolosy sleigh ary fotoana izao hisamborana ity vanim-potoana fialantsasatra mahafinaritra ity amin'ny marketing amin'ny mailaka. Fonosy amin'ny fomba milay ny Q2014 4 miaraka amin'ny fidiram-bola miakatra sy fampielezan-kevitra amin'ny mailaka mamorona! Aza adino, ny mailaka dia iray amin'ireo fantsom-pifandraisana nahomby indrindra ho an'ny mpivarotra tamin'ny 2013.
Nizara vitsivitsy fotsiny izahay lesoka mitsikera tokony hialanao amin'ny programa marketing mailaka anao ary averimberin'ity sary ity izany! Anisan'ny toro-hevitra ny fiantohana fa manana modely mailaka mamaly tsara ianao, atambaro ny ezaka ataonao fampiroboroboana ny fialantsasatra ara-tsosialy, manomàna fihenam-bidy tsara, ary aparitaho mandritra ny vanim-potoana ny mailakao mba hiantohana ny taha misokatra farany ho an'ireo mpiantsena tara ireo!
Oh, ary mbola tsy aloha loatra ny manomboka. Over antsasaky ny mpivarotra mailaka rehetra nanomboka ny mailaka fampiroboroboana ny fialantsasatra tamin'ny voalohan'ny volana septambra mba hisamborana ny antsasaky ny tsena izay manomboka mandany aloha. Aza adino ny mizara ny lesona nianarana tamin'ny taom-pialan-tsasatra lasa ary ny sasany fironana nozaraina tamin'ity vanim-potoana ity sahady.
Tags: 2014 fialantsasatrainfographic mailakatoro-hevitra amin'ny marketing amin'ny mailakamoanina mailakafandaharam-potoana fialantsasatraSary torohayfamolavolana mamaly finday
Ary izao ho an'ny lafiny maizina amin'ny varotra atiny B2B
Ity ny zavatra nataontsika mba hampivoarana ny trangam-pifamoivoizana telo